पुरुष होउन् वा महिला, उनीहरुलाई एक–अर्काका केही कुरा असाध्यै मनपर्छ भने कति कुरा असाध्यै खराब । महिलाको कुरा गर्ने हो भने आफूलाई मनपर्ने पुरुष छान्ने बेला उनीहरु स–साना कुरामा ध्यान दिने गर्छन् । जस्तै कि हालै सुपर मोडल अफ द इयरको सेटमा मिलिन्द सोमनसँग कुरा गर्दै गर्दा मलाइका अरोडाले उनलाई चिल्लो पार...
शारीरिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि भियाग्राजस्ता औषधिको प्रयोग घातक सावित हुनसक्छ । भियाग्राका कारण विभिन्न प्रकारका शारीरिक समस्याहरु आउने गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिएका चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसैबीच, एक व्यक्तिले भियाग्राको सेवनका कारण श्रीमती गर्भवती नभएको भन्दै मद्दत मागेका छन् । ५० वर्षीय उक्त व्यक्तिले लेखेका छन्...
मधुमेहका बिरामीको ‘सुगर लेभल’ १५ मिनेटमा घटाउने यो जुस
पसिनाको गन्ध हटाउन ४ घरेलु उपाय
ब्रालेट टपमा दिशाको बोल्ड अवतार
एजेन्सी मेट गालालाई फेसन दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो र स्टारहरुले भरिने कार्यक्रम मानिन्छ । यसपटक अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा भव्यरुपमा रेड कार्पेटको आयोजना गरिएको छ । जसमा विश्वभरका चर्चित सेलिब्रेटीहरु देखिएका छन् ...
शुद्ध घ्यू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । आयुर्वेदमा पनि घ्यूको फाइदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यसँगै छालाका लागि पनि घ्यू फाइदाजनक मानिन्छ । घ्यूमा फ्याटी एसिड, स्याचुरेटेड फ्याट, मोनो स्याचुरेटेड फ्याट...
बदामलाई भिजाएर यसको बोक्रा निकालेर खान सल्लाह दिइन्छ । तर के भिजाएको बदाम साँच्चै नै राम्रो हुन्छ ? के यसले केही अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्छन् ? यसबारे जानकारी लिऔं । बदाम खानुका फाइदाः बदाम पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छन् र फाइबर, प्रोटिन, भिटा...
ललितपुर । कलाकार तथा इन्टेरियर डिजाइनर कृति श्रेष्ठ उपाध्यक्षद्वारा लिखित ‘भूमिका’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । इन्टेरियर डिजाइनर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष बृन्दा कक्षपति प्रधान, कलाकार तथा कला समीक्षक मुकेश मल्ल, साहित्यकार ममता मृदुल र लेखक उपाध्यायले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्...
हरेक राति सुत्नुअघि मनतातो दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । वैज्ञानिकहरुले रातिमा दूध पिउनुपर्ने अर्को नयाँ कारण पनि पत्ता लगाएका छन् । रातिमा अनिद्राको समस्या छ भने मनतातो दूध पिएर सुत्नुपर्छ । चीनको नेशनल नेचुरल साइन्स फाउन्डेसनक...
पेटमा ग्यास भरिने समस्याले धेरैलाई सताएको छ । प्रायः ग्यासको समस्या केही समयपछि आफै ठिक पनि हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु यो समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिने गर्दैनन् । विशेषगरी, ग्यासको समस्याले सताएमा यसको उपचारको रुपमा घरेलु विधि अपनाउने गरिन्छ । कहिलेकाँही ग्यासको समस्या धे...
गर्भाधान भएको २४ हप्ताभित्र गर्भमा भएको भ्रूण नष्ट हुनुलाई मेडिकल भाषामा गर्भपात (मिसक्यारेज) भनिन्छ । गर्भपात हुनुअघि विभिन्न लक्षणहरु देखिन्छन् । उक्त लक्षणले गर्भपातको संकेत गर्छ । कसैलाई बारम्बार गर्भपातको समस्या पनि हुनसक्छ । गर्भपात हुने धेरै कारणहरु छन् । गर्भपात महिलाक...
अमेरिकी कम्पनी फाइजर–बायोएनटेकको कोरोनो भ्याक्सिनको बुस्टर डोजले संक्रमणबाट ९५.६ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्दछ । कम्पनीले १६ वर्ष माथिका १० हजार व्यक्तिमाथि ११ महिनासम्म गरिएको ट्रायलको जानकारी बिहिबार जारी गरेको छ । यसमा पत्ता लागेअनुसार फाइजर भ्याक्सिनक...
क्यान्सर यस्तो रोग हो जुन विस्तारै–विस्तारै पूरै शरीरभरी फैलिन्छ । सही समयमा क्यान्सरको लक्षण पत्ता लगाउन नसकेमा यसले ज्यानै समेत लिन सक्छ । क्यान्सर शरीरमा फैलिनु अगाडि देखिने लक्षणहरुको पहिचान गर्न सकेमा यसको उपचार सम्भव हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार क्यान्सरका सु...
स्वाद र पौष्टिक तत्वले भरपुर अण्डा प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत मानिन्छ । तर यो खानुभन्दा अघि यदि केही कुरामा ध्यान नदिने हो भने यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । विशेषज्ञका अनुसार केही अण्डामा पाइने एउटा खतरनाक ब्याक्टेरियाले मानिसलाई गम्भ...